BEEKEEPING FOR BILOWGA AH, TALOOYINKA UGU FIICAN EE BEEKEEPER BILAABI - BEEKEEPING
Ka hor intaanad bilaabin inaad abuurto apiary, bilawga bilawga ah waa in ay aasaasiga u bartaan aasaasiga ah shinnida. Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay talooyin aasaasi ah oo loogu talagalay beekhaarka bilawga ah: meesha laga bilaabo, sida loo doorto shinni, nooca qalalka, daryeelka saxda ah, iyo waxyaabo kaloo badan.
Astaamaha aasaasiga ah ee kaydsiga, waxaad u baahan tahay inaad marka hore ogaato
Astaamaha aasaasiga ah ee kaydka shinnida ayaa ah nooc ka mid ah alifbeetada. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro aqoonta. Maaddaama uu yahay beekeeper geedka, waxaad had iyo jeer baran doontaa. Buugaagta khaaska ah iyo maqaallo ku saabsan beekeeping ayaa halkan ka caawin doona. Iyo inaan helno oo keliya aragti ahaan, laakiin sidoo kale aqoonta farsamada ah, waxaad ku qori kartaa taageerada dharka qibrada leh.
Qalabka iyo dayactirka ee finan
Qof kasta oo doonaya in uu sameeyo dhirashada ilaalin weydiiso su'aal: meesha laga bilaabo. Diiwaangelinta rasmiga ah ee rasmiga ah Xitaa haddii aad qorsheyneysid inaad sii haysatid beehive, waxaad u baahan tahay inaad baasaboor ku hesho boogaha.
Marka xigta, waxaan dooranaynaa meel loogu talagalay apiary. Goobta ugu fiicnaanta ee apiary waxay ka dambaysaa xayndaabka sare ama xiga geedaha. Hooska dhirta ayaa ka caawiya cayayaanka si ay u ilaaliyaan microclimate ee guriga ee dayrta, iyo xayndaabka sare sare daboolayaa finan ka soo dabaysha. Waa in aanad lahayn daaqada dooxada: waxay u horseedi doontaa horumarinta cudurada fangas, taas oo adkaynaysa shaqada.
Waa muhiim! Halkaa waxaa kuxirsan in aaney jirin gumeysi shimbiraha cayayaanka ah - tani waa shinni dahab ah, foxbird, xeebta xeebta. Waa lagama maarmaan in la hubiyo in horay loo ogaado in deriskaaga degaanku aanu ku tarmin shimbirahaas.
Qalabka saxda ah waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda:
Naqshaduhu waa inay ilaaliyaan shinnida isbeddel deg-deg ah ee heerkulka, roobka iyo qoyaanka. Qeybta waa in ay ahaato mid diirran, laakiin xagaaga waa derbiyada dhismaha ma aha mid aad u kulul. Haddii rugta ay tahay mid dildillaac ah, dhumucda derbiga ma aha wax ka yar 3 cm Marka laga hadlaayo rugta laba-derbiga ah, meelaha u dhaxeeya derbiyada waxaa lagu xiraa xoqan.
Kalluunka waxaa loo sameeyey si aad u ballaaran oo loogu talagalay inuu soo saaro midhaha, iyo sidoo kale kaydinta sahayda malabka iyo manka dhirta (miro geedka). Naqshadeynta waa in la sameeyaa si aad u hagaajiso mugga.
Qalabku waa inuu ku haboon yahay dayactirka iyo wax qabadka. Naqshadeynta waa in si sahal ah loo demiyaa oo la isku daraa.
Dhammaan qeybaha rugta ayaa la siman yahay. Kiniinada isla waxay si weyn u fududeyn karaan hawsha beekhaaminta waxayna yareyneysaa waqtiga la qaatay.
Qalabku waa inuu lahaadaa qaab gaar ah oo loola tacaalayo shilinta: saldhiga laga saari karo, xarig gaar ah oo leh saxaarad.
Xilliga qaboobaha, buulka ayaa noqda mid yar, tirada miisaanka ayaa hoos loo dhigaa. Meelaha haray waa inaysan aheyn kuwo madhan, waa caado ah in ay buuxiso barkadaha insulating.
Is dhexgalka qoyska reer shinni
Mashruucaas oo kale sida kaydsiga shinnida, waa muhiim in la ogaado meesha laga bilaabo bilowga bilawga. Beekhaarka bilowga ah waxaa waajib ku ah inuu wax ka ogaado arrimaha gaarka ah ee xayiraadda shimbiraha.
Goob shinni ah (qoys) waa unug gaar ah oo habaysan oo aan xitaa la xiriirin qoysaska deriska ah. Goob shinni ah wuxuu ka kooban yahay boqoradda, shinnida shaqada iyo diyaaradda. Si wadajir ah, waxay u taagan yihiin duufaan shinni ah - waa qayb wareeg ah oo firfircoon.
Qaybta dadka ka baxsan waa buulka beedka. Buulkuna wuxuu ka kooban yahay malabyo leh barbaro iyo kaydka cuntada. Nest - waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qoyska shinni ah. Waxay u qalabeyneysaa labadaba dhalashada caruurtooda, iyo soosaarka wax soo saarka iyo sahayda, iyo ilaalinta qoyska. Xayawaanka shinni, xubnaha oo dhan aad bay ula xiriiraan. Maaha qof keligiis keligiis noolaan karo. Shaqooyinka nolosha waxaa si adag loogu qaybiyaa xubnaha qoyska.
Qaababka Nafaqada Bees
In apiary ee bilowga ah, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato meesha laga bilaabo arrin nafaqada ee bees. Bees waxay si gaar ah ugu daaqaa cuntada beeraha. Inta lagu jiro goosashada malab, shakhsiyaadka shaqeeya waxay ururiyaan nectar dhirta ubaxa waxayna u badalaan manka ubaxa iyo malab. Laga soo bilaabo dambe ee mustaqbalka u diyaariyaan manka.
Iyadoo la'aanta nectar, shinni-ururiyaasha waxay isticmaali karaan waxyaabo kale oo dhirta ku haboon: casiir ah oo ah miraha bislaaday iyo berry, suuf, iwm. Haddii qoyska shinni ahi aanu haysan nafaqo ku filan, waxaa loo oggol yahay in uu cuno dabocase sonkorta sharoobada. Si kastaba ha ahaatee, tallaabadan quudinta ayaa ah mid ku meel gaar ah, malabkana malab waxay noqon kartaa waxyeello muddada jiilaalka.
Iyada oo ku xiran jawiga iyo xaaladaha ah ee aruurinta, xoojinta nafaqada ee gumeysiga shinni ayaa kala duwan. Xilliga xagaaga, marka ay jiraan ukumo badan oo la soo saaray oo ku yaal xiniinyaha iyo shaqo xoog leh ayaa sii socota, shinni waa in la daajiyo. Xilliga qabowga, qoysku wuxuu cunaa kaydka malab. Shakhsiyaadka qaangaarka ah ee isku-xirka iyo xayawaanka ee marxaladda saqafka ah ku quudinta dharka sare. Shinni shaqaale qaangaar ah wuxuu u baahan yahay isticmaalka malab iyo manka. Iyadoo aan malab, shinni ku dhiman doonaa, sidaas darteed marka safarka fog ee fog, shinni ah waxay soo iibsadaan malab dhowr maalmood.
In dhowr maalmood ee ugu horreeya ka dib markii hatching, ukunta ee dirxiga ku quudin on caanaha shinni. Tani waa cunto gaar ah. soo saaray qanjidhada shinni. Laga bilaabo maalinta afaraad, dhallinyaradu waxay bilaabaan inay ku darsadaan walxaha malab, manka iyo biyaha. Ka dib markii la xakameeyo qashinka, quudinta ayaa la joojiyaa.
Dirxiga ee hudheellada (unugyada boqoradda) ayaa si joogto ah ugu nuujinaya caanaha shinni. Koox gaar ah oo shinni ah, oo daryeesha ilmo-galeenka qaan-gaarka ah, ayaa u qoondeynaya caanaha noocan ah waxayna quudineysaa iyada oo aan loo eegin xilliga xiga. Ka dib markaad ka baxdo buulkeedii (unugyada shinniisha boqoradda) iyo u guurista unugyo gaar ah, ilmo-galeenku wuxuu ku noolaan karaa dhawr maalmood iyada oo u mahadcelinaysa malab ama cajiinka raaca ee sonkorta iyo malab.
Barashada wax kasta oo ku saabsan bees iyo beekeeping for bilowga ah, waa in aad barato qaababka dhalmada ee bees. Laba nooc oo dhalmo ah ayaa udub dhexaad u ah malabyada: madadaalada dadka gaarka ah ee colonka iyo soo jiidashada (kala qaybinta hal shinni shinni ah).
Xaaladda kowaad, wareegga nolosha ee shinnida malabku wuxuu ku bilaabmaa soo saarida ukunta. Inta lagu jiro xilliga jiilaalka, boqoraddu waxay sameysmaysaa xero cusub, oo ukumo ku dhex ridaysa unug kasta oo ka mid ah malabkii.
Nooca labaad ee taranta waa qayb dabiici ah wareegga nolosha ee bees. Dheef-abuurka wuxuu dhacaa marka kolonyada ay u kala baxaan laba qaybood. Qeyb ka mid ah, oo ka kooban 40 ilaa 70% dadweynaha rugta, waxay la degaan boqoradda gaboobay ee meel cusub. Waxaa jira fursado lagu badbaadi karo labadaba cusub iyo deegaankii hore.
Wixii la macaamiloonayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (malabaha), boqoradda dhalinyaradu waxay u duushaa cimilada cadceedda min 12 ilaa 17 galinka dambe. Darawallada waxaa badanaa laga soo qaadaa tiro badan oo dhowr kiiloomitir u jirta apiary. Ilmo-galeenka wuxuu ka qaataa hal ilaa seddex jeer maalintii, isla markaana isku dhufashada celcelis ahaan 7-8 drones.
Xaaladaha soo socda ee horumarinta shinni waa kala duwan yihiin: ukun, dirxi, arday, arday.
Sida loo helo iyo badbaadinta malab
Malabka cusub ee boomada leh ayaa badanaa leh midab isku xiran, laakiin ugu dambeyntii wuxuu koraa daruur. Ka dib marka shinnida la shaabadeeyo, enzymes badan ayaa ku jira unugyada. Thanks to enzymes malab waxaa lagu kaydiyaa sanado badan (10-20 sano). Si kastaba ha ahaatee, nolosha shelf ee malab waxay ku xiran tahay inta badan kaydinta ku haboon.
Honey waa qaab kale. Kala beddelashada malab ee dareeraha ilaa xaalad adag ayaa lagu magacaabaa crystallization (sonkorta).
Ma taqaanaa? Joogista dareeraha ee malab waxaa loo hayn karaa muddo dheer, haddii aad marka hore ku kaydiso 5-6 toddobaad ee 0 ° C, ka dibna ku adkeyso 14 ° C. Honey ka shaqeynta sidan ayaa ah dareeraha laba sano.
Kaliya noocyo naadir ah oo jimicsi ah iyo malab yar oo ah malab maaha kuwo sonkor ah. Malab doofaareedka bislaaday oo kaliya ayaa soo fiicnaanaya.
Beekeeping for the beginners waxay muujinaysaa aqoonta ku saabsan xeerarka kaydinta malab ee la helay.
Si loo ilaaliyo dhammaan sifooyinka faa'iidada leh ee malab, waxaad u baahan tahay inaad raacdo sharciyadan fudud:
Ka ilaali malabta weel dabool leh dabool adag oo xiran. Weelka waa inuu noqdaa mid qalalan, iyada oo aan urta aan loo baahnayn.
Ha dhigin malab qaboojiyaha. Kondhisku wuxuu keenaa halsano.
Ha u oggolaan raajooyinka tooska ah ee qorraxda inay ku dhacaan weel balaadhan oo ah malab, haddii kale sifooyinka antimicrobial ee malabku hoos u dhaco iyo fitamiinada waa la burburin doonaa.
Honey waa inaan lagu kaydin qol heerkulka sare. Ka fogow beteriyada kulul.
Ha ku haynin malab furan oo soo socda oo ah sooyaal, sigaar cabbin iyo walxo dhiraysan oo la mid ah.
Goobta ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo malabku waxay ku jirtaa sanduuq qalalan, oo ka baxsan iftiinka qorraxda iyo urta kale.
Waxbarashada aasaasiga ah ee kaydsiga kaydka ee bilowga ah, waxaa muhiim ah in aan la dayicin mawduuca sida cudurada shinni. Waxaa jira tiro ka mid ah cudurrada shinni ah oo keena dhibaatooyin badan oo ah beeyaal. Ka hortagga iyo daaweynta waqtigeeda ayaa ka badbaadin karta abuurista iyo faafinta cudurrada dabiiciga ah. Calaamadda ugu weyn ee muujinaysa jiritaanka cudurku waa dabeecad aan ku filneyn shinni.
Cudurada waxay noqon karaan pathological ama xilliyeed.m Cudurrada cudurada waa cudur halis ah oo daran. Kooxdan waxaa ka mid ah caleemo qafiif ah, curyaan, shuban iyo shuban. Cuduradani waxay u baahanyihiin daaweyn. Cudurada xilliyeed waxaa keena soo kabashada cayayaanka iyo cudurrada kiliinikada.
Cudurrada cudurkan ayaa sidoo kale loo kala qaybiyaa faafinta iyo aan la qaadin.
Sababta cudurrada faafa waa sheyga maadada dhirta (cudurada fungal, bakteeriyada, rickettsia, caabuqa fayras). Cudurada isdaba-joogta ah waxay badanaa ku faraxsan yihiin jeermiska xoolaha.
Ka hortagga cudurada shinni waxay ku salaysan tahay dhacdooyinka gaarka ah. Dhammaan tallaabooyinka ka hortagga ah waa in la fuliyaa si dhammeystiran, oo leh dayactirka jadwalka ah iyo dayactirka ee apiary. Shaqada waxaa la sameeyaa horraanta guga - wakhti marka cuduradu weli aan faafin.
Qalabka waxtar leh ee beekhaamijka bilawga ah
Bilaabidda kaydsiga shinni ee "dhuunta" waa in lagu fuliyaa nabadgelyo buuxda iyo ilaalin dhamaystiran oo ka soo horjeeda shinni. Ujeedadaas awgeed, wuxuu abuuray qalab wax lagu kaydsado oo muhiim ah. Tallaabooyin taxaddir ah waa in loo fiiriyaa labadaba ilaalintooda iyo ilaalinta dadka ku hareeraysan.
Badbaadinta shaqada ee apiary
Bilowgii hore oo keliya ayaa ku jawaabay beekeeping waa wax aan la aqbali karin in la baadho apiary iyada oo aan loo marin habab gaar ah oo ilaalin ah. Qalab badan oo ka mid ah qalabka difaaca ayaa ku jira suuqa (dhar kala duwan, maskado, galoofyo). Si kastaba ha noqotee, sida gumeysiga, waxaad u isticmaali kartaa dharka caadiga ah ee apiary. Isku day inaad doorato dhar aad u firfircoon oo raaxo leh, tani waxay si weyn u fududeyneysaa shaqada.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la ogaado xaqiiqda muhiimka ah ee ku saabsan kaydsiga shinnida: haddii aad samaysatid maaskaro maskaxda ah, isticmaal mugdi madow (madow) oo ah tulle ama mesh. Midabka iftiinka ah laguma talinayo - wuxuu waxyeeli karaa muuqaalka.
Waa caado ah in wajiga lagu ilaaliyo maaskaro oo leh qaab muuqda. Maaskogani wuxuu abuuraa aag difaac ah oo u dhexeeya wejiga iyo shabakadda.
Bees ayaa si gaar ah loogu soo jiito meel u dhaxeysa kabaha iyo dharka. Wax soo saarku wuxuu noqon karaa xayndaab loogu tala galay dadka kufeesanaya iyo kuwa looyaqaano, kuwaas oo lagu iibiyo dukaamada isboortiga. Gaiters waxay ku habboon yihiin nooc kasta oo kabo ah waxayna ku siin doonaan badbaado la isku halleyn karo.
Gacan-siinta beerta caadiga ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo gacmaha. Si kastaba ha ahaatee, gacmo-gashi waa in ay ahaataa mid culus oo ku filan si looga hortago in beesku aysan gacmaha is qabin.
Ma taqaanaa? Beerweeyayaasha qaarkood waxay isticmaalaan guud ahaan caadooyinka sanadka sida ilaalinta. Si tan loo sameeyo, jumpsuit wuxuu dhejiyaa meelo jilicsan oo si habboon u daboolaya marinka qoorta. Sidaa darteed, kharashka ugu hooseeya Waxaad heli doontaa dhar difaaca oo aad u fiican.
Waxa aad u baahan tahay inaad si habboon u daryeesho shinnida
In beekeeping, waxaa jira dhowr qawaaniin adag iyo talooyin waxtar leh oo aan la dayacin. Qaar badan oo beeraley ah oo aan hagaagsanayn ayaa hudheelka u fura kormeer dhowr jeer maalintii. Kormeerada noocan oo kale ah waxay keenaysaa xadgudub ah qaab-dhismeedka heerkulka ee finanka. Intaa waxaa dheer, qaabkani wuxuu ku mashquuliyaa beeska wuxuuna kobciyaa kobcintooda.
Habka u adeegida apiary kuma xirna tirada tirada baaritaanada cuncunka, laakiin tayada hawsha la qabtay. Shaqo macquul ah ee apiary waxay tilmaamaysaa habraacyo isdhaafsan muddo gaaban iyo kormeer yar. Si loo hubiyo daryeelka habboon ee beesku, waa inaad si cad u qorsheysaa hawlaha iyo waqtiga lagama maarmaanka u ah dib u celinta. Wixii daryeelka ee shinni ee guga, beekeepers acerees noqon doonaa ku filan 15-20 daqiiqo. Si aad u kormeerto xayawaanka shinni ee calaamadaysan, waxaad u baahan doontaa qiyaastii toban daqiiqo.
Dayactirka guud wuxuu u baahan yahay kormeer joogto ah inta lagu jiro bilaha kuleylaha si loo hubiyo in dumarka beeraleyda ah la dhigo ukumo, shaqooyinka shaqeeya si firfircoon ay u gutaan shaqadooda, iyo kolonyada waxay leedahay qol ku filan in la balaariyo. Bilaha qabowga, baaritaannada laguma talinayo. Iskuday inaadan kuleylka qaaliga ah ka diideynin furuuraha.
Waa muhiim! Ka dib markaad la shaqeysid shinni ha ka tegin liiska, dharka wasakhda ah ama qalab meelaha ay carruurta yaryari noqon karaan. Hantida ayaa weli ah sunta sunta ah, taas oo marka dambe dhalin karta xasaasiyad carruurta.
Qalab ah qalab loogu shaqeeyo sheyga shinni
Waxaad u baahan doontaa qalabka ugu yar ee soo socda:
Qalabaynta sheyga. Tani waa qalabka ugu muhiimsan ee lagu shaqeeyo sheyga shinni. Khariidadu waxay leedahay codsiyo fara badan: qabsii qaabka laga soo saaro rugta, ka saar faashadda shinbiraha (propolis), nadiifi maqaarka, xoqin aalkolka hooyada.
Mindida beekeeper. Mindida waxaa loogu talagalay in la gooyo malabkii hore ee muraayadaha.
Nadiifinta burushka si loogu isticmaalo shubida shinbiraha.
Fiiri si loo furo malabkii iyo ka saareen hadhuudh.
Lekala iyada oo la isticmaalayo qashinka iyo munaasadaha dukaanka ah iyo rukun khaas ah oo loogu talagalay muraayadaha.
Sigaar cabid. Waa wax aan suurtagal ahayn in lala shaqeeyo shinni aan sigaarka cabbin. Qiiqa ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo beeska.
Tuubada sigaarka. Beekeepers waxay isticmaalaan qiiqa tuubooyinkooda shaqadooda. Haddii aan tuubo lahayn, macnaha guud ee shinnida ayaa lumaya.
Sidee loo doortaa beekhaamiyaha bilowga ah ee qoyska beekeeper
Ma aha mid aad u badan in la weydiiyo su'aasha: sida loo daryeelo bees, waayo, beergooyska ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan waa in la doorto shinni quwad leh oo tayo leh. In tiro of bees ah, waa adag tahay in la arko ilmo-galeenka, laakiin waa u qalantaa in la xuso shinni-naag mar - oo aad xusuusan doontaa. Shinbirku si tartiib tartiib ah ayuu u socdaa, waa shinni badan oo shaqeynaya wuxuuna leeyahay caloosha dheer. Raadinta ilmo-galeenka waa inuu ahaadaa bartamaha buulka bukaanka ee leh cayayaanka ama meel u dhaw tuugada cusub. Qeybta hore ee xilliga xagaaga, ilmo-galeenka ayaa laga yaabaa in uu ku yaallo wareegyada ugu dambeeya (malab iyo burgundy oo ah malabkii).
Ka dib markii la helo ilmo galeenka, isku day inaad eegto: haddii baalasha ay jabaan, haddii lugaha iyo calooshu ay dhaawacmaan. Ka dibna fiiro u yeelo tayada ukunta (cayayaanka). Ilmo-ku-beddelaad ku-meelgaadh ah ayaa ukumo kasta oo unugyo ah (oo aan lahayn boog), oo gebi ahaanba buuxinaya malabkii. Haddii qashin la qalajiyo, waxaa jira hulalka - ilmo-galeenku waa mid aan la isticmaali karin, waana inaad beddeshaa. Sidoo kale fiiro u yeelo tirada shinnida iyo kaydka quudinta. Qeybta shinni ee caadiga ah, bisha Abriil waa in ay ahaataa ugu yaraan 1.5 kg oo shinni ah (6 geesood), laga bilaabo Maajo ilaa Agoosto - ugu yaraan 3 kg. Intaa waxaa dheer, ee gumeysiga shinni waa inuu jiraa ilmo-galeenka uurjiifka, 6 kg oo cunto ah, 4-5 xabbadood oo kalluun iyo 1-2 xabbo oo rooti shinni ah. Badanaa shinni waxaa lagu iibiyaa weelasha xayawaanka. Waxaa muhiim ah in la helo shinni wax ku ool ah oo jiilaalka si fiican uuna u adkaysto cudurrada.
Jidka ay ku jiraan beekhaamiye cusub, waxaa jiri kara niyadjab, xilli xun, iyo dhibaatooyin kale oo badan. Si loo kaydiyo kaydka raashin iyo faa'iido leh, waxaa habboon in la barto asaasiga kaydka kaydka ee bilowga hore iyo in la helo natiijo wax ku ool ah.